Onu Ngwa, Akpa Ọnụ Ụzọ Ákwà, Akwa Ọpụpụ Ngwaọrụ Nrụpụta na Ntinye na China
Nkọwa:Ọnụ ụzọ Ngwa,Akpa akpa akpaaka,Ụlọ elu ngwa ngwa ngwa,Onye na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri,,
Home > Ngwaahịa > Ọnụ ụzọ Ngwa
Ngwaahịa nke Ọnụ ụzọ Ngwa , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ọnụ ụzọ Ngwa , Akpa akpa akpaaka suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ụlọ elu ngwa ngwa ngwa R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Onu Ogugu Uzo Ogbaagba Akuku N'uzo Kpọtụrụ ugbu a
Ogwe Mgbochi Mkpụrụ Obi na Nchekwa maka Oghere Na-akpaghị aka Kpọtụrụ ugbu a
Onu ogwe aka 50HZ-60HZ Ogwe Mkpụrụ Mkpụrụ na Nchekwa Kpọtụrụ ugbu a
50HZ-60HZ Ogwe Mkpụrụ Mkpụrụ Control na Nchekwa Maka Ụlọ Kpọtụrụ ugbu a
Nchekwa Airbag Safety maka High Speed ​​Door Jiri Kpọtụrụ ugbu a
Moto Sistemụ na Onye njikwa Servo Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ Ụzọ Igwe Mmiri Na-agbanwe Akpaka Radar Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ ụzọ ngwa ngwa Induction Radar Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ ọkụ ngwa ngwa Radar Kpọtụrụ ugbu a
24GHz Akpaaka okporo ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu Electronic 24GHz Automatic Door Radar Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ ụzọ dị elu Servo Motor Suppliers Kpọtụrụ ugbu a
Gbanwee Ọnụ Ụzọ Ámá Akpaaka Servo Brushless Motors Kpọtụrụ ugbu a
Ndị na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ oloko Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ ụzọ dị elu nke ọnụ ụzọ 220v Kpọtụrụ ugbu a
Oghere na-emeghe akpaaka Servo Motor Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
Ngwa ndị eji eme ihe gụnyere akụrụngwa ụzọ mpempe akwụkwọ, ọgba ụzọ ụzọ dị elu na igbe nchịkwa, ngwa ngwa ọnụ ụzọ dị elu, ngwa ngwa ndị ọzọ. Anyị nwere ike ere akụkụ ọ bụla nke ngwa ndị a.
Ihe nnyefe akpaaka: Akpa okporo ụzọ anyị nwere 1 motor + gear reducer, 1 belt, 7 mita, 1 idle pulley, Microprocessor, 4 sets of carriage blue wheels, 2 sets of guides guides, 2pcs akara ntanetị, 2 tinye belt clamp mounts brackets , 1 nhazi ọkpọ ọkụ na njikọ eriri, 2 onye na-ekpo ọkụ, okporo ígwè Aluminụ nke ogologo ya bụ 2.08 mita, mita 3, ma ọ bụ mita 4. Anyị bụ ndị na-emepụta ọnụ ụzọ na-emeghe ọnụ ụzọ na-emepụta iji nye ndị mmadụ ohere. Mgbawa akpaaka na-arụ ọrụ iji nye ọrụ nrịgo ahụ bụ otu n'ime ihe ndị mere ọnụ ụzọ na-eme ka ọ dịkwuo mma. Anyị na-emepe ụzọ ntanetị ndị na-agba ọsọ ugbu a, ohere nchekwa na mara mma. Ọnụ ụzọ eji akpaaka nwere ọtụtụ ọrụ bụ isi nke gụnyere: ọnọdụ akpaka na oghere mepere emepe zuru ezu na / ma ọ bụ ọnụ ụzọ mepere emepe, ma wepụga naanị maka ijikwa okporo ụzọ. Imeghe ọnụ ụzọ akpaka nwere ike ịdị mfe iji mee ka ọnụ ụzọ oghere dị obere ma ọ bụ karịa. Ọrụ nchebe dị mkpa dịka ihe mmetụta nchekwa dị na-egbochi imechi ọnụ ụzọ ma ọ bụrụ na mmadụ ma ọ bụ ihe dị na mpaghara nchọpụta. Ọ bụrụ na emechie ụzọ ụzọ mgbe emechi, ha na-emeghere ozugbo ma ọ bụ ma ọ bụrụ na emechie ụzọ ụzọ mgbe ọ na-emeghe, a ga-akwụsị ya ozugbo site na usoro nkwụnyeghachi akụrụngwa nchekwa.
okporo ụzọ ụgbọala na-agba ọsọ dị elu: Ụlọ ọrụ anyị nwere German SEW Motor, Japan Mitsubishi Controller. Onye nke anyị na-ahụ maka ụgbọ okporo ígwè Hofic. Onye a ma ama bụ SEJ motor na Holip. German SEW Motor na Japan Mitsubishi Controller: Ọ dị mfe ịchọta ezigbo ọkpọ ume maka ngwa gị na SEW. Ọnụ ụzọ ntinye ọnụ ụzọ anyị na-arụ ọrụ na-adaba maka nnukwu ọsọ na ọfụma dị elu na ọnụ ụzọ mgbagwoju anya. Usoro dum dị na obere ngwugwu ọkụ, ọ nwere nnukwu elekere na nnukwu ọsọ ọsọ, mkpọtụ ụda, ntụkwasị obi siri ike, nke dị nro na nke dị nro, ọ dị mma maka ebe dị elu na ebe ojiji. SEJ motor and Holip controller: Mkpụrụ ụgbọala atọ na-eji ígwè magnetik nwere nnukwu ojiji, ọ bara uru maka isi igwe isi na inyeaka ụgbọala, na ọ na-eji maka dị iche iche chọrọ ngwa ngwa ịkwụsị ma dozie ọnọdụ.
Ngwa ngwa ngwa: Ọkwọ ụgbọala: Ụzọ dị elu Servo System motor and control, motor SNMA / SEJ + reducer + flang + encoder + control box. Ngwa ndị ọzọ: Middle aluminum bar, bottom aluminum bar, aluminum vertical track, stainless steel vertical track, brushes, round nylon strip, PVC roll, rolling steel tube complete, drum be; s for rolling tube, side end covers, stainless steel cover , ikuku ígwè, ikuku akpa ikuku, ọkụ ọkụ ọkụ, igwe onyonyo onyonyo 24 Gigahertz, PVC welding machine, ọkụ na ọkụ ọkụ, PVC transperent windo, magnetik, fotocell, akara ntanetị, bọtịnụ push ntuziaka, ịdọ aka ná ntị mkpu ụda .
Ngwa ụzọ ndị ọzọ: Oghere ụzọ ụzọ: motor 220V-380V, igbe nchịkwa, nkwụsịtụ mmiri, ngwaọrụ nkwụsịtụ ọkụ, alloy eriri pulley, ogwe aka na-arụ ọrụ, usoro akpa ikuku, nkwonkwo ụkwụ nke ndu ndu.
Maka ngwa nkọwa zuru oke, biko jiri nlezianya nyochaa nkọwa anyị.
Ọnụ ụzọ Ngwa Akpa akpa akpaaka Ụlọ elu ngwa ngwa ngwa Onye na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri Ọnụ ụzọ ngwangwa